रातको १२ बजे पनि जनताका समस्याका निम्ती हिडेको छुः नेपाली कांग्रेस युवा नेता बुढाथोकी (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ असोज २६ गते ००:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । देश भर चुनाबी माहोल तातेको यो समयमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा कुन नेता कुन क्षेत्रमा उठ्ने ? भन्ने कुरा चर्चाको विषय रहेको छ । यस्तै काठमाण्डौ क्षेत्र नम्वर ४ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभा 'ख' मा प्रत्यक्ष तर्फ नेता राजाराम बुढाथोकी सहित अन्य नेताहरुको नाम केन्द्रमा सिफारिस भएको छ । यसै पेरिफेरी तथा समसामयिक राजनीतिक बिषयमा उनै बुढाथोकीसंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
राजनीतिक माहोल तातेको छ, के कुरामा केन्द्रीत हुनुहुन्छ ?
वास्तबमा अहिले जब मेरो पार्टीले मेरो नाम क्षेत्र तथा जिल्लाले प्रदेश प्रत्यक्ष तर्फ सिफारिस गर्यो । म यसमा नै ब्यस्त छु ।
तपाईको उम्मेदवारी किन र केका लागी ?
यो उम्मेदवारी चाहीँ जनताको सेवा गर्ने अवसरको निम्ति हो । जनताको काम गर्नका निम्ति हो । मलाई पार्टीले यहा भन्दा अगाडि नगर प्रतिनिधिका रुपमा होस या कपन जस्तो मतदाताका हिसाबले पनि ठुलो गाविसमा सर्वदलिय संयन्त्रमा बसेर जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा काम गरेको तर निर्वाचित नै भएर काम गर्नको निमित्त मलाई सिशफारिस गरेको छ । यसलाई मैले जनताको सेवा गर्ने अवसरको रुपमा लिएको छु ।
यहा लगायत अन्य ब्यक्तिको नाम पनि पार्टीले सिफारिस गरेको छ, अव तपाईलाई नै टिकट दिनु पर्छ भन्ने आधार चाहीँ के नी ?
वास्तबमा जो नेताहरु सिफरिस हुनुभएको छ उहाँहरु सबै मेरो आदरणिय व्यक्तित्वहरु हुनुन्छ । पार्टीमा त्याग उहाँहरुको पनि छ । तर जनतासंग भिज्ने काम फरक पाटो रहेछ । मैले नगर प्रतिनिधि भएर जुन काम गरे जनताको घर–घरमा गएर जनतासंग नजिक रहेर काम गरेको हुनाले पनि आज मलाई मेरो पार्टीले आवश्यकता महशुस गरेर सिफारिस गरेको छ । अन्य साथीहरु पनि हुनुन्छ । उहाँहरु पनि आदरणिय हुनुन्छ ।
हिजोको गतिविधिलाई हेरेर जनताले मुल्यांकन गर्दछन, यो मानेमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
म जनताको निम्ति खटिएको सिपाही हुँ । म जनता तथा पार्टीको निम्ती कुनै समयको प्रवाह नगरी चाहे रातको १२ बजे नै किन नहोेस, म हाजिर भएको छु । जनताका बिभिन्न समस्याहरुमा हातेमालो गरेर जनताको सेवामा तल्लीन रहेको छु । यही मेरो योगदान हो र मैले कुनै पद नपाए पनि म यो काम गरिनै रहन्छु । जनताको सेवामा समर्पित भई नै रहन्छु ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको स्थानिय चुनावमा कांगे्रस कमजोर देखियो, अहिलेको अबस्थालाई कस्तो देख्नु हुन्छ ?
यो क्षेत्र कांग्रेस कमजोर रहेको क्षेत्र हैन । तर कहिलेकाही टेक्निकल कारण हामी कमजोर जस्तो देखियौ । तर चुनाव जित्नलाई मत पेटीकामा मत चाहिन्छ । हो हामी यसपालीको स्थानिय चुनावमा कमजोर नै भयौ । कहिलेकाही फुटबल गेममा कमजोर टीमले बलियो टीमलाई जित्छ नी । हो अहिले हाम्रो सवालमा त्यहि भएको हो । तर हामी कमजोर छैनौ र आगामी चुनाबमा यसको हामी यसको पुष्टी गर्ने छौ ।
नगरबासीहरुको प्रतिक्रिया के पाई रहनु भएको छ ?
स्थानिय जनताहरुको प्रतिक्रिया अत्यन्तै राम्रो र उत्साहित पाएको छु । कपनको भोटरको संख्या धेरै छ । त्यस कारण कपनका जनताको कुरा चाहीँ कपन भित्रबाटै प्रतिनिधि होस भन्ने नै छ । त्यस कारण म कपन कै स्थानिय भएको हुनाले जनताहरु उत्साहित हुनुन्छ ।
तपाईको अवको भुमिका चाहीँ के रहन्छ ?
मेरो भुमिका अव अन्तरिक रुपमा टिकट आफ्नो पक्षमा पार्ने नै रहन्छ र फेरी टिकटका निम्ती पार्टीले मलाई आबश्यक ठानेन भने पनि अन्य साथीहरु जसले टिकट ल्याउनु हुन्छ । म पार्टीको झोला बोकेर पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई जिताउन लाग्नेछु र एउटा राजनीतिकर्मीको भुमिका नै जनताको सेवा गर्ने हो । त्यसैले जनताको सेवामा समर्पित रहने छु । देशको राजनीति एउटा जटिल परिस्थितिमा गएको छ । यसलाई चिर्दैै अगाडी बढ्नु पर्ने जिम्मा नेपाली कांग्रेस भित्र छ ।
अन्त्यमा मुलुक जटिल परिस्थितिमा रहेको छ । वाम तालमेलको नाउमा दुई वटा पार्टी एक हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । आउदै गरेको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले लिएको राष्टियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नीतिलाई अगाडी सार्दै जनतामा गएर हाम्रो नेतृत्वमा आएको शान्ति र संविधानलाई कार्यन्वयन गर्दै देश निर्माणमा लाग्नका निमित्त नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतको आवश्यकता छ । अन्त्यमा मेरा नगरबासी तथा आम–जनतालाई दिपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
समय र संवादको लागी धन्यवाद ।
यहाँहरुलाई पनि मलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसर प्रदान गरि दिनु भएकोमा धेरै–धेरै धन्यवाद दिन्छु ।
राजाराम बुढाथोकीसंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः